အလီဘာဘာ၏ ၁.၂ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပထမဆုံးသောအရောင်းအ ၀ ယ်စက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လက်လီကစားနည်း၏ဒုတိယပိုင်းတွင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း။ - News News-Hunan Zhonggu Science and Technology Co. , Ltd ။
အလီဘာဘာ၏ ၁.၂ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပထမဆုံးသောအရောင်းအ ၀ ယ်စက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လက်လီဂိမ်း၏ဒုတိယပိုင်းတွင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း။
views:11 Author: ထုတ်ဝေမည့်အချိန် - 11 မူလအစ:
မကြာသေးမီက， အလီသည် ၁.၂ ဘီလီယံ Youbao ကိုပထမဆုံးသောရှယ်ယာတစ်ခုအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ စမတ်ကွန်တိန်နာလုပ်ငန်းနှင့်မောင်းသူမဲ့လက်လီလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကအာရုံစိုက်ရာဖြစ်လာသည်။
အလီဘာဘာ၊ လူတိုင်းနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသည်။ လက်ရှိအလီဘာဘာ၏“ အသစ်လက်လီ” ၏မဟာဗျူဟာအရပုံသဏ္layာန်သည်စတင်ပုံဖော်နေပြီဖြစ်သည်။
မောင်းသူမဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အလီသည်အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်အမြဲတမ်းပါဝင်ခဲ့သည်။
Ali သည် Alipay မှတစ်ဆင့်လုံး ၀ ထောက်ခံချက်အားရရှိခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြီးမားသည့်လက်လီချန်နယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောထောက်ခံမှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအသိဥာဏ်ပညာ၊ အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်အမြန်များအတွက်လုံလောက်သောကျည်ဆန်များကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
လက်လီလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အလွန်ခက်ခဲသွားသည်
Wal-Mart သည်တစ်နှစ်ဝက်အတွင်းစတိုးဆိုင် ၁၆ ခုကိုပိတ်လိုက်သည်
Tencent နှင့် Ali တို့၏စခန်းများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားလာစေသည်
တရုတ်လူ ဦး ရေ
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ၀ န်ထမ်းများ၏လစာသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်းတရုတ်၏စုစုပေါင်းငှားရမ်းခမှာ ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အော့ဖ်လိုင်း Entity စတိုးအမြတ်လျှော့ချ
အကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၊ စားသုံးမှုနှင့်စားသုံးမှုပုံစံနှင့်အရောင်းအဝယ် ၀ န်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်ပတ်ရန်လမ်းကြောင်းအသစ်များလိုအပ်သည်။
နောက်ခံကြွယ်ဝသောနောက်ခံရှိသည့်ပြင်ပမှထွက်လာကြသောလုပ်ငန်းရှင်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာကြသည်။
NongFu Spring, Wants လိုလားသည်။ Wahaha, Uni-President နှင့်အခြားရိုးရာအစာရှောင်စားသောက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အရောင်းစက်စက်ရုံတွင်စတင်ပူးပေါင်းလာသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏယွမ် ၂၀ ဘီလီယံနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးရိုးစွဲခန့်မှန်းချက်များ
၂၀၂၀ တွင် ၆၅ ဘီလီယံကျော်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်
သုံးနှစ်ဒြပ်ပေါင်းများကြီးထွားနှုန်းသည် ၅၀% ခန့်ရှိသည်။
ယူနစ် ၂ သန်းကျော်ကိုစတင်လည်ပတ်လိမ့်မည်
သုံးနှစ်အတွင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသောပေါင်းစပ်တိုးတက်မှုနှုန်း
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သီးသန့်အရောင်းစက်များသည်စျေးကွက်တွင် ဦး တည်ရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်
Vending Machine သည်ကုန်ပစ္စည်းမြှင့်တင်ရေးလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမီဒီယာဖြစ်လာလိမ့်မည်
Zoomgu အရောင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအရည်အသွေးမြင့်ပြီးအပြည့်အဝအရောင်းအ ၀ ယ်စက်များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောထုတ်ကုန်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုလက်လီဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
၁.၁ နှစ် ၁၅ နှစ်လုံးလုံးစက်ထုတ်လုပ်မှု၊ စတုရန်းမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၊ တစ်နှစ်လျှင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ၁၅၀,၀၀၀၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းနှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအဓိကထားခဲ့သည်။
2. အကြီးစားပုံစံပုံစံအရောင်းစက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်အလွန်မြင့်မားပြီးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာနိမ့်သည်၊ အရည်အသွေးမှာတည်ငြိမ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအာမခံသည်။
၃။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုပမာဏကြီးမားသည်။ လစဉ်တင်ပို့မှုပမာဏသည်တစ်လလျှင် ၆ ကီလိုမီတာ၊ နှစ်စဉ် ၀ ယ်ယူမှုပမာဏသည်သန်းရာနှင့်ချီပြီး၊ ၎င်း၏ ၀ ယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်သည်သာမာန်အသုံးပြုသူများထက်များစွာနိမ့်သည်။ စက်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်၊ ဖောက်သည်များသို့အမြတ်အစွန်းများများပြန်လာစေခြင်း
၄။ အလိုအလျောက်ပိုက်လိုင်းမြင့်ဖိအားမြှုပ်စက်၊ အမြှုပ်များထူထပ်သောအမြှေးပါးအလွှာ၊ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောအလွန်ပါးလွှာသောအပေါက်များ၊ ထူထဲသောလျှပ်ကာများ၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပိုမိုစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။
၇။ VIP တိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် + WeChat တိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်ဘဝ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အမှားတုံ့ပြန်ချက်၊ စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ စျေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ လိုဂိုပြုပြင်ခြင်း၊ မည်သည့်အချိန်နှင့်နေရာတွင်မဆို Wechat Notification နှင့်အခြားဘက်ပေါင်းစုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊
၈။ စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်အဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များအားဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
သင်ချက်ချင်းပင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသောအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တန်ဖိုးကြီးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကြီးမားသော ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများ၊ သင်၏အချိန်နှင့်တန်ဖိုးရှိသောစွမ်းအင်ကိုသက်သာစေခြင်း၊ သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အမြတ်များစွာရရှိရန်သင်၏အဓိကယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ လက်လီလှိုင်းအသစ်အောက်တွင်နို့အရောင်းစက်များ၊ အိတ်များအခွင့်အလမ်းများ!
နောက်တစ်ခု: Zoomgu ပိုင်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းခွဲ (Zhonggu Intelligent Equipment Manufacturing Co. , Ltd. ) သည်စမတ်လက်လီရောင်းချသောစက်ရုံပန်းခြံကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။